Sida Loo Heliyo Xiriirinta Bogagga Bogaggaaga Bogaga, Hordhac
Ku dar Email Xiriiriyo iyo Fariimaha Isku-xirka
Ku darida Email Naqshad aasaasi ah si aad u hesho
Haddii aad la xiriirto akhristayaasha boggaaga internetka oo aad kugula xiriirto adiga ayaa muhiim ah, ka dibna barashada in aad hal abuur leh aad la xiriirto email-kaaga ayaa noqon kara mid wax ku ool ah.
Ma ogtahay in aad wax waliba ku dhejin karto xidhiidhkaaga si marka akhristayaashaada riixo ay jiri doonaan farriin ay u leeyihiin inay bilaabaan? Waxaad ku qori kartaa mawduuc mawduuca mise fariin ku jirta jirka emailka. Tani waxay ka dhigeysaa kala soocista email aad u fudud. Waxaad sidoo kale heli kartaa emailka loo diro cinwaanno badan oo e-mail ah haddii aad rabto.
Aynu sheegno inaad rabto inaad ogaato bogga qof kuu soo diraya, waxaad ku qori kartaa fariin ama farriin email ah si markaa kuu yimaado, waxaad ogaan doontaa bogga ay ka timid oo kaliya adoo arkeysa. Waxaa suurtogal ah inaad hayso liis su'aalo ay dadku ku weydiin karaan, ama qaybo kala duwan oo ka mid ah boggaaga. Waxaad ku qori kartaa farriimo kala duwan mid kasta si aad u ogaan doonto waxa akhristahaagu rabo kahor xataa xitaa akhri emailka.
Waa kuwan liiska qaar ka mid ah waxyaabaha aad u isticmaali karto in aad ku xirto email-kaaga:
mailto = Wuxuu sheegaa macmiilka emailka ee u diraya emailka.
mawduuc = Tani waxay fariin gelinaysaa khadka mawduuca ee emailka.
jirka = ikhtiyaarkan waxaad fariin u diri kartaa qeybta emailka.
% 20 = Waxay u dhexeysaa meel u dhaxeysa ereyada.
% 0D% 0A = wuxuu kuu soo dirayaa farriintaada xariiqda xiga. Tani waxay la mid tahay "Ku noqoshada" ama "Ku qor" furahaaga kumbuyuutarka.
cc = Koobi carbuun ama email u dir cinwaanka email kale oo aan ahayn cinwaanka boostada.
bcc = Iska iloobo nuqulka qoraalka ama emailka loo soo diro cinwaanka emailka kale ee kale ee boostada iyo cinwaanada cc.
Tani waa sidaad u isticmaali karto waxyaabahan si ay kuu caawiyaan. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo qoro xiriirka emailka aasaasiga ah. Xiriirka emailka aasaasiga ah wuxuu bilaabmaa sida aadka ah ee xiriir joogto ah:
Waxa kale oo ay ku dhammaataa sida aadka u kala duwan:
"> Qoraalka halkan ku lifaaqan halkan
Maxaa ka dhacaya bartamaha waa waxa ka duwan. Adiga, dabcan, waxay rabaan inay bilaabaan iyagoo ku daraya cinwaanka emailkaaga si ay akhristayaashaada kuu soo diraan emailka. Tani waxay u egtahay wax sidan oo kale ah:
Hadda oo aad ogtahay in badan, waxaad isku dari kartaa xiriirka emailka asaasiga ah:
Qoraal loogu talo galay halkan
Waxay u egtahay sidan akhristayaashaada:
Qoraal loogu talagalay halkan
Hoos u soco, guji, waxay u furi doontaa macaamilkaaga emailka si aad u soo diri karto email, haddii aan isticmaalayo cinwaanka emailka ah ee dhabta ah. Maadaama aadan isticmaaleyn cinwaanka emailka dhabta ah, dhab ahaantii ma soo diri kartid email ahaan. Isku day inaad beddesho cinwaanka email-ka been ah adoo keligaa ah, qoraalkaaga qoraalka ah (keydin faylka ah .htm ama .htm marka hore), oo arag haddii aad naftaada u diri karto email.
Hada, ogolow in aad qaadato xidhiidhkaas emailka aasaasiga ah oo aad ku darto. Ugu horreyn waxaan leenahay xiriirka emailka asaasiga ah oo u eg sidan:
U ogolow mawduuc soo dir emailka. Waxaan sameyneynaa marka hore markaan ku darno calaamad su'aal (?), Ka dibna ku dar mawduuca mawduuca, ugu danbeynna ku daro waxa aad rabto in mawduuca mawduucu sheego. Ha iloobin inaad ku darto lambarka sirta ah ee u dhexeeya ereyada. Koodhkaagu wuxuu ka shaqeyn karaa daalacayaasha qaar, laakiin waxa laga yaabaa inaanay dhammaantood ka shaqeyn. Koodhka lagu daro xiriirka mawduuca wuxuu u egyahay sidan:
mawduuca = Mawduuca% 20Tusaale% 20Here
Tani waa sida xiriirinta emailkaaga hadda u muuqato:
Tani waa sida ay u eegi doonto akhristayaashaada:
[mail url=email@address.com?subject=Subject%20Text%20Here] Qoraal loogu tala galay halkan [/ mail]
Tag oo isku day. Fiiri sida qoraalku uga muuqanayo mowduuca mawduuca hadda?
Hadda waxaad ku dari kartaa waxyaabaha kale. Fariin ku dar jirka ee emailka ama ku dar cinwaanada kale ee emailka si aad email ugu dirto. Markaad ku darto sifo kale oo ku xiran xiriiriyahaaga emailkaaga waxaad ku bilaabi doontaa ampersand (&) oo ma calaamad su'aal (?).
Qodobka lagu daro qoraalka jirka ee emailka wuxuu u egyahay sidan:
& jir = Hello% 20haarre! !! 20%% 20% 20% 20% dadka 20% erayga.
Qoraalka Dhanka Halkan
[mail url=email@address.com?subject=Subject%20Text%20Here&body=Hello%20everyone !!% 20Kuwan% 20is 20% 20% dadka 20% ereyga] Text To Link Here [/ mail]
Tag oo isku day. Eeg sida qoraalka muuqaalka ugu muuqanayo jirka ee emailka?
Haddii aad rabto inaad ku darto cinwaanada emailka khadka cc iyo bcc ee emailka, dhammaantood waa inaad sameysid koodka kuwa kuwa kale ah.
CC wuxuu u ekaan karaa sidaan: & isaakin@mailress.com
bcc siduu u egyahay sidaan: & bccail@mailress.com
Markaad kuwan ku darto xiriirinta emailkaaga, koodku wuxuu u egyahay sidan:
Qoraalka halkan ku lifaaqan halkan
[email username_subject_subject_subject=Subject%20Text%20Here&body=Hello%20everyone !!% 20Waa% 20is 20% 20% dadka 20% ereyga & cc = email2 @ address.com & bcc = email3 @ address.com] Text For Halkan [Link]
Isku day oo arag sida ay u shaqeyso!
Hal wax ugu dambaysa. Waxaad samayn kartaa qoraalka jirka, oo aad ku daray, inaad ka gudubto khadadka, haddii aad rabto. Kaliya ku dar koodka ku jira qoraalka jirka.
Halkii ay kuxiran lahaayeen : Hello% 20everyone !!% 20%% 20% 20% 20% dadka 20% erayga.
Waxaad sameyn kartaa sidan oo kale: Hello% 20everyone !!% 0D% 0AThis% 20is% 20 adoo ah 20% dadka 20%.
Koodhkaagu hadda wuu u egyahay sidan:
[mail url=email@address.com?subject=Subject%20Text%20Here&body=Hello%20everyone !!% 0D% 0AThis% 20is% 20your% 20 dadka% 20text. & cc = email2 @ address.com & bcc = email3 @ address.com] Qoraalkani waxaa weeyaan [/ email]
Guji si aad u aragto faraqa. Bedelkii akhrinta:
Hello everyone !! Tani waa qoraalka jirka.
Waxay hadda akhrisaa:
Tani waa qoraalka jirka.
Taasi waa wax kasta oo ay jirto. Ku raaxeyso !!
Dib u eegid: Sababta ay Gmail u tahay mid Fiican
Sida loo Maaro oo loo Xakameeyo Mawduucyada Email
Sida foomka loo diro Email
Sida Loo Isticmaali Deeqo Qaadashada
Sida Loo Mamnuuciyo Walxaha Sawirada leh Sawirada Photoshop
10ka ugu fiican ee Apple CarPlay Apps
Baro Muhiimadda Moments ee Taariikhda Microsoft Windows
Sida loo abuuro HTML Whitespace
Diiwaanada GIF: Goorta la Isticmaalayo
Sidee loo Uninstall Apps on Mac ah
Fallout 3 Ku daro Qodobada Kumbuyuutarka ee loogu talagalay PC - Armor
Isticmaal iTunes si aad ugu bedesho MP3-yada loogu talagalay Audiobook
Dib-u-eegista Software-ka Marmoset Toolbag
Sharciyada Dadka Shirkadaha Shakhsi ahaaneed FM
Sida loo Isticmaalo Isku Duubka Warbaahinta ee Microsoft Edge for Windows
Sida loo Xakameynayo Libgdk-win32-2.0-0.dll Lama helin Cillado
Dhalada Dareemaha Khatarta ah v3.4
Waa maxay Windows 10 Mawduuca?
Ubuntu Unity iyo Ubuntu GNOME
Nafaqada Xayawaanka ee "Sims 2: Xayawaanka"
Isticmaal Utility Disk si aad u abuurto RAID 1 (Mirror) Array
Tilmaamaha Wii U Gift